OSC momba ny “Raharaha Leva”: “Sarotra ampiharan-dalàna ny manampahefana” | NewsMada
OSC momba ny “Raharaha Leva”: “Sarotra ampiharan-dalàna ny manampahefana”
“Mbola sarotra hatrany ho an’ny mpitsara ny mampihatra lalàna amin’ireo olona manana fahefana eto amin’ny firenena”, hoy ny firaisamonina sivily tamin’ny fanambarany: “Fitsarana mahakasika ny tontolo iainana: aoka izay ny tsimatimanota!”, afakomaly, momba ny “Raharaha Raveloson Ludovic na i Leva”.
Anisan’ny manao sonia izany, ohatra, ny Alliance voahary gasy, ny hetsika Rohy, ny ONG Ravintsara… Tsiahivin’izy ireo fa nomen’ny lehiben’ny mpampanoa lalàna ao Toliara fahafahana hanao Main d’oeuvre pénale (Mop) Raveloson, ny desambra 2019. Nefa tsy ara-dalàna izany. Izao indray, nomen’io fitsarana io fahafahana vonjimaika izy. Mampiseho fiangarana hatrany izany.
Mbola manjaka ny kolikoly
“Hita koa fa mbola manjaka ny kolikoly ao amin’ny fitsarana”, hoy ny fanambarana. Mangataka amin’ireo manampahefana izy ireo hamoaka Interdiction de sortie du territoire (IST) ho an-dRaveloson. Hisorohana ny hitsoahany any ivelany izany. Miandry sy manantena koa izy ireo fa hiasa haingana sy tsy hitanila ny fitsarana momba ireo vesatra hafa iampangana azy.
Rahoviana vao hofaizin’ny fitsarana ao anatin’ny fahaleovantena sy ny tsy fitanilana ireo manao ny tsy rariny, ankoatra an-dRaveloson? Mankahery ireo mpitsara sy ireo mpiasam-panjakana manao ny fahamarinana izy ireo, hamita ny asany masina ao anatin’ny fahamarinana. Mba hanana fahasahiana hitoroka ny fomba fanao ratsy misy izy ireo, hiala amin’ny fifampiarovana eo amin’ny mpiray sehatr’asa izay manimba ny laza sy ny fahombiazan’ny fitsarana eto Madagasikara.